खैरो भौं - म तिनीहरूलाई कसरी लुकाउन सक्छु | बेजिया
सुसाना Godoy | 15/06/2022 12:00 | सुन्दरता
के तपाईं आफ्नो भौंमा खैरो कपाल लुकाउन चाहनुहुन्छ? त्यसोभए हामीसँग चालहरूको एक श्रृंखला छ जुन तपाईंले अभ्यासमा राख्नु पर्छ। यो सामान्य छ कि एक दिन, जब हामी यो क्षेत्र सफा गर्दैछौं, हामी देख्छौं कि कसरी अरू कोही सेतो कपाल यसलाई कब्जा गरेको छ। पूरै निधारलाई एउटै रङमा देखिने बनाउन केही गर्ने बेला आएको छ।
मेरो भौंमा किन सेतो कपाल छ? मेलानिनको प्रगतिशील हानिको कारण, हामीले सेतो कपाल देख्न थाल्छौं। तर भौंमा मात्र होइन कपालमा पनि पक्कै पनि हुन्छ। तपाईंले चिन्ता गर्नुपर्दैन किनभने त्यहाँ जहिले पनि चरणहरू र सुझावहरूको श्रृंखला हुन्छ जुन तपाईंले सकेसम्म चाँडो अभ्यासमा राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले ल्याउने सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्!
1 मेकअपको साथ खैरो भौं लुकाउनुहोस्
2 भौंको रंग
3 खैरो भौंको लागि घरेलु उपचार
मेकअपको साथ खैरो भौं लुकाउनुहोस्
तपाईलाई थाहा छ, मेकअप हामीले गर्न सक्ने ठूलो मद्दत मध्ये एक हो। किनभने यदि यो विकृत गर्ने बारे हो भने, यसले आफ्नो मिशन पूरा गर्नेछ। निस्सन्देह हामीले सधैं उत्तम उत्पादनहरू, र विशिष्टहरू छनौट गर्नुपर्छ। यस अवस्थामा, तपाइँ एक भौं पेन्सिल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ वा, मेकअपको साथ पनि भौंको लागि अभिप्रेत छ। यदि तपाइँसँग हल्का ब्राउजहरू छन् भने, तपाइँको ब्राउजको छाया भन्दा थोरै हल्का पेन्सिल वा रङ छनौट गर्नु राम्रो हुन्छ।.
जबकि यदि तपाइँको कपाल धेरै कालो छ भने एक वा दुई भन्दा बढी कालो छायाको लागि जानुहोस्। जब तपाइँ यसलाई छनोट गर्नुहुन्छ, तपाइँले भौंलाई राम्रोसँग कंघी गर्नुपर्छ ताकि रंग समान रूपमा फैलियोस्। तपाईं आफ्नो भौंको रेखाहरू कोर्न जाँदै हुनुहुन्छ र तिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक भर्नुहोस्। पछिको लागि तपाईं आफैलाई ब्रश संग मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम राम्रो हुनुपर्छ, ताकि यो अधिक सटीक छ। तपाईले पेन्सिलको साथ पनि त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि ब्रशसँग हल्का धब्बा बनाउन सक्नुहुन्छ। विचार यो छ कि क्षेत्र कभर गरिएको छ तर त्यो प्राकृतिक समाप्त संग।
जसरी हाम्रो कपालमा विभिन्न रङहरू देखाउनको लागि रंगहरू छन्, त्यसैगरी भौंहको हकमा पनि विशेष प्रकारहरू छन्। यसरी आँखा झिम्काउँदा सेतो कपाल लुकाउन सकिन्छ । हो साँच्चै, कपालको डाईले भौहेंमा रंग नगर्नुहोस्, किनकि तपाईलाई क्षेत्रमा जलन हुन सक्छ। तसर्थ, तपाईंले एक विशिष्ट डाई किन्नु पर्छ र यसको निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्छ। यो सामान्यतया कपाल वृद्धि को दिशा मा लागू हुन्छ, तर विपरीत दिशा मा। यस तरिकाले हामी यो सुनिश्चित गर्छौं कि यो सबै राम्ररी कभर गरिएको छ। हामी 10 मिनेट भन्दा कम कुर्नेछौं र यो हो। त्यहाँ धेरै घरहरू छन् जसमा भौंको टिन्टहरू छन् र तिनीहरूमध्ये केही पहिले नै प्रक्रियालाई सजिलो बनाउन पेन्सिलको रूपमा सटीक उत्पादनहरू छन्।
खैरो भौंको लागि घरेलु उपचार
एक छेउमा तपाईं सामान्य रूपमा केमोमाइल बनाउन सक्नुहुन्छ। जब यो पहिले नै चिसो हुन्छ, तपाईंले यसमा चार चम्मच एकसँग मिसाउनु पर्छ एक चुटकी बेसार (आधा चम्मच भन्दा अलि कम)। अब, हामी राम्ररी मिश्रण गर्नेछौं र यो लागू गर्न तयार हुनेछ। निस्सन्देह, यो एक ब्रश संग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। तपाईं लगभग5मिनेट मात्र छोड्नुहोस् र पानीले कुल्ला गर्नुहोस्।
साथै केहि लागू गर्नुहोस् कालो चिया इन्फ्युजन यो प्रभावकारी छ। किनभने यसमा पिग्मेन्ट हुन्छ जसले सेतो कपाल लुकाउँछ। तर यो साँचो हो कि यो केवल अस्थायी हो।
कफी र कोकोआ सेतो कपाललाई अलविदा भन्दै हामीले हाम्रो भौंलाई गाढा रंग दिन सक्ने अर्को उत्कृष्ट सामग्रीहरू हुन्। यो कोको पाउडर र सबै कुरा राम्ररी मिश्रित संग कालो कफी हुनुपर्छ। यदि मिश्रण धेरै पानी बाहिर आउँछ भने, तपाईं एक सानो मह थप्न सक्नुहुन्छ। यसको साथ तपाईले देख्नुहुनेछ कि यसले तपाईको छालालाई कसरी राम्रोसँग पालन गर्दछ।
तपाईलाई थाहा छ, यी सबै चालहरूले कपाललाई रंग दिनेछ, तर तार्किक रूपमा तिनीहरू टिक्दैनन्। यो सजिलै भन्न सकिन्छ कि तिनीहरू समस्याबाट बाहिर निस्कन सिद्ध हुनेछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » भुइँमा खैरो कपाल लुकाउने चरणहरू
इमेल मार्केटिङ, आफ्नो व्यापार को लागी एक महत्वपूर्ण उपकरण